အဖြေများကိုရှာရန်လုံလောက်သောဝီရိယရှိပါစေ Martech Zone
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 11, 2009 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ဒီသီတင်းပတ်အစောပိုင်းကတော်တော်လေးအေးမြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတင်ပို့တဲ့တွစ်တာတစ်ခုတင်ခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာသည်လှပသပ်ရပ်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံး ၀ င်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဘာကိုမှန်းမသိခဲ့ပါ ကိုပြု or ဘယ်လို အလုပ်တွေအများကြီးမပါဘဲအသုံးပြုရန်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီချက်ချင်း interface ကို "ရိုးရှင်း" ခဲ့ပြန်ပို့လိုက်သည်။ ငါ "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!" ငါသည်သူတို့၏ယုတ္တိဗေဒနှင့်အတူငြင်းခုန်သွားမခံခဲ့ရပါဘူး။ သူတို့ဟာသိသာထင်ရှားတဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူတွေထက်ပိုပြီးလိမ္မာပါးနပ်တယ်။
သင်သည်မြင်းတစ်ကောင်ကိုရေသို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကမသောက်နိုင်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, interface ကိုရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ် သူတို့ကို။ သူတို့ကတည်ဆောက်ခဲ့သည်! ဤလျှောက်လွှာသည်စျေးကွက်ထဲတွင်မပြောင်းလဲဘဲရှိနေသည်မှာအတော်အတန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ Hmmm ... ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မမွေးဖွားသေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ interface ကရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေရခဲ့တယ်။ ဖြစ်ကောင်းနှစ်ခုနှစ်ခုချိတ်ဆက်နေကြသနည်း
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကိုသူတို့စကားမပြောနိုင်ပါကစော်ကားခြင်းသည်မမျှတပါ။ နှိုင်းယှဉ်ပြောရရင်၊ သူတို့ကစကားမပြောနိုင်ဘူးလို့အမြဲတမ်းသင်ယူဆသင့်တယ်။ သုံးစွဲသူအားလုံးစကားမပြောနိုင်တော့ဘူး။ သင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားသောအခါ 'စိတ်ဘောင်တစ်ခုကိုသာသတ်မှတ်ခြင်း' ဖြစ်သည်။
ငါ၏အခုနှစ်မှာ Clint စာမျက်နှာနှင့်စကားပြောဆိုမှုသူကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဖောက်သည်သတင်းအချက်အလက်၏မယုံနိုင်လောက်အောင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည် - စစ်တမ်းများ၊ အာရုံစိုက်အုပ်စုများနှင့်မဟာဗျူဟာများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ငွေနှင့်အချိန်ကိုချွေတာသည်။ သူ၏ဖောက်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းကိုကြိုက်ကြပြီးသူတို့ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အဘယ်အရာလိုအပ်သည်ကို Dotster သိသည်။ Dotster ကသူတို့ကိုစတင်နားထောင်ရန်အခြေခံအုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကသင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ စကားလက်ဆုံပြောဆိုနေပြီးဖြစ်သည်။ သင်ရှာနိုင်သည် တွစ်တာစမ်းကြည့်ပါ ဦး Facebook ပေါ်ရှိ Fan Page, အသုံးပြုခြင်း Google ကသတိပေးချက် သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခု တင်၍ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်ကိုရယူလိုက်ပါ။ သင်နားထောင်နေကြောင်းသင်၏သုံးစွဲသူများကသိလျှင်၎င်းတို့သည်သင်လိုအပ်သည့်အဖြေများပေးလိမ့်မည်။ သင်ရုံအဖြေတွေကိုရှာဖို့လုံလောက်တဲ့စမတ်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။
Blog Traffic ကို eCourse နှင့် Address Two ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ
11:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 48 မှာ
စဉ်းစားကြည့်ရအောင်၊ ဒီကောင်လေးကသူ့လက်မောင်းကိုအနားမယူဖို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တစ်ခုပဲ။ ဦး ထုပ်ထုတ်လုပ်သူများသည် chapeau interface ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
12:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 14 မှာ
software developer များအား Newsflash ။ သင်၏ဆော့ဗ်ဝဲမည်မျှပင်အေးအေးဆေးဆေးရှိနေပါစေကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရှာရန်စက္ကန့် ၆၀ ကျော်အချိန်ဖြုန်းရမည်ဆိုပါက၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
14:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 6, 54 မှာ
ကြီးစွာသော post Doug, သင်တို့နှင့်အတူပိုပြီးသဘောတူနိုင်ဘူး!